Idatha Yokuziphatha Kwedijithali: Imfihlo Egcinwe Kakhulu Yokushaya Ishadi Elifanele ngeGen Z | Martech Zone
Amasu wokumaketha aphumelele kakhulu akhuthazwa ukuqonda okujulile ngabantu abenzelwe ukufinyelela kubo. Futhi, ukubheka iminyaka yobudala kungesinye sezibikezelo ezivame kakhulu zokwehluka kwezimo zengqondo nokuziphatha, ukubheka ngelensi yezizukulwane sekuyisikhathi eside kuyindlela elusizo yokuthi abathengisi bakhe uzwela ezilalelini zabo.
Namuhla, abenzi bezinqumo zenkampani abathembele phambili bagxile kuGen Z, owazalwa ngemuva kuka-1996, futhi kunjalo. Lesi sizukulwane sizololonga ikusasa futhi kulinganiselwa ukuthi sesivele sinakho okuningi njengoku $ 143 billion ekusebenziseni amandla. Kodwa-ke, inani elingakaze libonwe locwaningo lokuqala nolwesibili olwenziwa kuleli qembu alibonakali lihamba ngokwanele.
Yize kwaziwa kabanzi ukuthi uGen Z umele abomdabu bangempela bedijithali, izindlela ezijwayelekile ezithathiwe ukuthola izidingo kanye nezifiso zabo azisitsheli ngemisebenzi yabo yangempela yedijithali. Ukukhomba amasu wokumaketha esikhathini esizayo okuzoncika kakhulu ekuqondeni okuphelele kwalaba bantu, okuletha okubalulekile: AbakwaBrands kufanele bandise umbono wabo wokwakha uzwela ukubhekelela izici ezinkulu zedijithali zobunikazi balesi sizukulwane.
UGen Z kuValue Value
Sicabanga ukuthi siyazi Gen Z. Ukuthi bayisizukulwane esihluke kakhulu okwamanje. Ukuthi bayakwazi ukubekezela, banethemba, bafuna isikhundla futhi bathambekele emisebenzini. Ukuthi bafuna ukuthula nokwamukelwa kwabo bonke, nokwenza umhlaba ube ngcono. Ukuthi banomoya wokuhweba futhi abathandi ukufakwa ebhokisini. Futhi-ke, ukuthi bazalwa bephethe i-smartphone esandleni sabo. Uhlu luyaqhubeka, kufaka phakathi uphawu olungenakuphikwa lokuthi ukufika kweminyaka yobudala ngesikhathi se-COVID-19 kuzoshiya kulesi sizukulwane.
Kodwa-ke, izinga lethu lokuqonda elikhona liklwebha ubuso ngezizathu ezimbili ezibalulekile:
Ngokomlando, ukuqonda ngezizukulwane - nezinye izingxenye ezithile zabathengi — zitholwa kakhulu ngamathrendi abekiwe nezimpendulo zenhlolovo. Ngenkathi isimilo nemizwa eshiwo kuyindlela ebucayi, abantu bavame ukubanzima ukukhumbula imisebenzi yabo edlule futhi abakwazi ukuchaza imizwa yabo ngaso sonke isikhathi.
Iqiniso lodaba ukuthi uGen Z akazazi nokuthi bangobani okwamanje. Ubunikazi babo yinto eqondiswayo njengoba baphakathi kwesigaba esakha kakhulu empilweni yabo. Ukuzibonakalisa kwabo kuzoshintsha ngokuhamba kwesikhathi — ikakhulukazi kakhulu kunezizukulwane ezindala, ezisunguliwe.
Uma sibheka ku Izinkulungwane zeminyaka nokuthi sikuthole kanjani kungalungile phambilini, amaphutha ezindleleni zamafa okufunda ngezizukulwane ayabonakala. Khumbula, ekuqaleni babebhekwa njengabanomsebenzi omubi wokuziphatha futhi bengenakho ukwethembeka, okuyinto manje esaziyo ukuthi ayilona iqiniso.
Ukumba Ngokujulile Ngemininingwane Yokuziphatha Kwedijithali
Ukulinganisa ubukhulu beGen ikhona empambanweni yedijithali nokuziphatha. Futhi ngenxa yokuthuthuka kwezobuchwepheshe, ngokokuqala ngqa selokhu kwafundwa izizukulwane, abathengisi banokufinyelela kwimininingwane yokuziphatha ecebile enikeza iwindi lemisebenzi yangempela eku-inthanethi kaGen Z ngemininingwane eyinkimbinkimbi. Namuhla, izinkulungwane zabantu ezingama-24/7 zokuziphatha kwedijithali ziyalandelwa, kepha zivunyelwe, zilandelwa.
Idatha yokuziphatha kweDijithali, uma ihlanganiswe nedatha engaxhunyiwe ku-inthanethi futhi ishiwo, idala isithombe esiphelele, sesiteshi sabantu abahlanganisa ukuthi kungani nokuthi kungani. Futhi lapho uthola lo mbono ophelele, uthola ubuhlakani obusebenzayo ngempela obungakha kubo amasu wokumaketha.
Nazi izindlela ezimbalwa idatha yokuziphatha yedijithali engasiza ukukhuphula ukuqonda nokunemba kwezibikezelo maqondana noGen Z — noma iyiphi ingxenye yabathengi — noma ngabe uqala ngaziphi izisekelo zolwazi.
Isheke langempela: Thola ukuqonda kuzithameli ongazi lutho ngazo, futhi ubheke amathumbu ukuthi uzozihlola ngokuqhubekayo yini. Isibonelo, ungaphenya isigaba nabahluzi bomkhiqizo. Futhi ungafunda ukuthi amakhasimende aphelelwe ngamadijithi aziphatha kanjani.
Ubukhulu obusha: Faka izendlalelo kuzethameli osuvele wazi okuthile, kepha akwenele, mayelana. Uma unezigaba eziyisihluthulelo nama-personas asevele esunguliwe, ukwazi abakwenzayo online kungaveza izindawo ezingalindelekile zamathuba.
Ukulungiswa: Thola ukwehluka kuzimpendulo ezichaziwe-ezibucayi ezimweni lapho abantu behluleka ukukhumbula ngokunembile imisebenzi yabo edlule.
Ukwazi ngokuqiniseka ukuthi abathengi bahlanganyela kanjani ngaphakathi kwendawo enkulu yedijithali kunamandla, ikakhulukazi kwezentengiso zedijithali. Ukuvezwa kumasayithi ajwayelekile avakashelwe, izindlela zokucinga, ubunikazi bohlelo lokusebenza, umlando wokuthenga, nokuningi kungakhombisa ukuthi ungubani umuntu, unakekela ini, yini alwa nayo, nemicimbi emikhulu yokuphila. Behlome ngalo mqondo onamandla kaGen Z kuwo wonke ama-nuances abo, abathengisi bangabeka amaphromoshini, babhekise ukuthengwa kwemidiya, bacwenge imiyalezo, futhi bahlanganise okuqukethwe — phakathi kwezinye izinto — ngokuzethemba okukhulu.
Ukwazi ukuthi le datha ikhona hhayi ukuzisebenzisela ukukhetha ngamabomu ukungabaqondi abathengi. Lokho kusho ukuthi, akuyona yonke imithombo yedatha yokuziphatha yedijithali eyenziwe ngokulingana. Okuhamba phambili yilokhu:
Longitudinal, kuleyo misebenzi ihlolwe ubusuku nemini futhi ngokuhamba kwesikhathi, okungakhanyisa ukwethembeka noma ukuntuleka kwayo kanye nezinye izitayela.
Okuqinile, ukwakha iphaneli lokuziphatha elanele ngosayizi ukuletha isampula emele imisebenzi yedijithali yabathengi nedatha eyanele yomkhiqizo wakho ukuze isebenze kuyo.
I-agnostic yedivayisi, ukuhlinzeka ngekhono lokubheka indlela yokuziphatha kwideskithophu neyamaselula.
Ubufakazi bekhukhi, okusho ukuthi akuncikile kumakhukhi, okuzoba yimfuneko kungekudala.
Njengoba uGen Z eqhubeka nokuvela, ukuxhumana kwabo nendawo yedijithali kuzodlala indima ebalulekile ekufundiseni abakhangisi ukuthi bangashintsha kanjani nabo, bathole ukwethenjwa kwabo, futhi bakhe ubudlelwane obuhlala njalo. Imikhiqizo engcono kakhulu izokwamukela lesi sici esisha sedatha njengesici esisha senzuzo yokuncintisana, hhayi kuphela kumasu okucija abhekene noGen Z, kepha nanoma iziphi izethameli eziqondiwe.
Tags: ukuqonda kwezethameliidatha yokuziphathaamakhukhiisiphambanoidatha yokuziphatha yedijithaligen zisizukulwane zizizukulwaneidatha yezweIzinkulungwane zeminyakaukungena ngemvumeukulungiswa